Etu esi ebuli ụlọ 3D na Google Earth - Geofumadas
Ọtụtụ n’ime anyị maara ngwa ọrụ Google Earth, ọ bụ ya mere n’afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụla mbido nke ọhụụ, iji nye anyị ọtụtụ ụzọ dị mma ga-esi kwekọọ na ọganihu nke teknụzụ. A na-ejikarị ngwá ọrụ a iji chọta ebe, chọta isi ihe, wepụta ihe nhazi, tinye data iji mee ụdị nyocha ma ọ bụ ihe nleta iji gaa na mbara igwe, ọnwa ma ọ bụ Mars.
Google Earth adabaghị na njikwa data akụkụ atọ, ebe ọ bụ na ọgbọ ya dabere na ngwa ndị ọzọ nke sitere na usoro, ụlọ ma ọ bụ ụdị akụkụ atọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele 3D ngwa ngwa nke ihe owuwu na mpaghara ụfọdụ, ịkwesịrị ịnwe ụfọdụ data n'aka dịka:
Ọnọdụ - ọnọdụ
Ulo elu nke ihe ahụ ma ọ bụ ihe owuwu
Na mbu ngwa a ga-emepe, n’ime menu isi, ihe eji abanye oru Tinye polygon, windo mepere, na-egosi na ngwaọrụ ahụ adịla njikere.
Site na ọrụ a akọwapụtara n’elu, ị kọwapụta ihe ndebiri nke achọrọ, na taabụ estilos ¸ gbanwee ahịrị ma jupụta na agba, yana opi ya.
Na taabụ Gburugburu, A ga-etinye ihe iji gbanwee polygon a na 3D. Aramzọ ndị a bụ:
Gosipụta ọnọdụ ahụ, n'ọnọdụ a Ikwu na ala Tinye nhọrọ site na menu ndọpụta.
Ka e wee mepụta nhazi zuru oke, a ga-enyocha igbe Gbasaa akụkụ ya niile na ala
Altitude: kọwaa site n’ịgbanye ihe mgbochi n’agbata ala na mbara, ala dị nso karị, ịdị elu ala.
N'ụzọ dị otu a, e wuola usoro ahụ na usoro 3D, ọ ga - ekwe omume ịme ọtụtụ polygons ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Taa, mmelite dị otú a na Google agbanweela echiche nke ngwa a, na-enye ohere ịnweta ihe nchọgharị - ọ bụrụhaala na ọ bụ Chrome -, yana nke ọ bụla na ngwaọrụ ya. Enwere ike ịgagharị ihe ngosi ahụ ngwa ngwa, yana 3D, Street View, a na-ahụ ihe njirimara ọnọdụ, yana igosi na ọnọdụ balloon dị na ya, kpọmkwem ebe ị na-agagharị.
Vidio a na-egosi otu okike nke okpukpu atọ dị na Google Earth na-arụ ọrụ.
Previous Post«Previous Usoro ArcGIS Pro na QGIS 3 - banyere otu ọrụ ahụ
Next Post STAAD - imepụta ngwugwu a na-akwụ ụgwọ bara uru iji kwado nsogbu nrụgide - West IndiaNext »